अनभिज्ञ रहेको कुरा स्वीकार गर्नको निम्ति विशाल हिम्मत चाहिन्छ
काठमाडौं २ मंसिर- कुनै व्यक्तिलाई आफ्ना मान्यता र विश्वासहरूको घेराले बनेको आफ्नो मानसिकताबाट बाहिर निस्किन तथा आफ्नो जीवनको आधारभूत पक्षबारे नै पूरै अनभिज्ञ रहेको कुरा स्वीकार गर्नको निम्ति विशाल हिम्मत चाहिन्छ । के तपाईं आफूसँग दुईवटा हातहरू छन् भनेर विश्वास गर्नुहुन्छ ? वा, तपाईंलाई आफूसँग दुईवटा हातहरू छ भन्ने कुरा थाहा छ ? यदि तपाईंले आफ्नो आँखाले हेर्नुभएन भने पनि तपाईंसँग दुईवटा हातहरू छन् भनेर जान्नुहुन्छ । यो कुरा तपाईंले अनुभवबाट जान्नुभएको छ । तर, जब भगवानको कुरा आउँछ, तपाईंलाई विश्वास गर्न भनिएको छ । कसैले पनि तपाईंलाई देवत्वको खोज गर्न भन्दैनन् !